Goboladda Nugaal iyo Haylaan oo maanta ciyaaraya Finalka Koobka gobolada Puntland - Bulsho News
Rooble oo Guddi u saaray baarista fal ciidamada AMISOM ay...
Beesha Caalamka: Waa in la xaliyo walaaca laga keenay Hanaanka...
Goboladda Nugaal iyo Haylaan oo maanta ciyaaraya Finalka Koobka gobolada Puntland
Waxaa Maanta la ciyaarayaa ciyaarta kama dambeysta ah ee (Finalka) Koobka Kubadda Cagta Gobolada Puntland.
Xulalka Gobolada Haylaan iyo nugaal oo isku soo haray wareegga kama dambeysta ayaa foodda isdari doona ciyaar xiiso badan oo indhaha lagu wada hayo.
Taariikh ahaan labadan Xul waa markii ugu horeysay ee wareeg kama dambeys isugu yimaadaan ,Xulka Gobolka Nugaal markii ugu horeysay maahan oo uu Final yimaado halka Haylaan ay tahay markii ugu horeysay ee ay soo gaaraan Final.
Tartankan oo inta uu socday ahaa mid xiiso badan ayaa waxa uu kasoo gudbay marxalado adag iyo ismari-waa sababay in ay xilalka ku waayaan xubnihii xiriirka kubadda Cagta ee Puntland.
Diyaargarowga Ciyaarta kama dambeysta ah ee labada xul ayaa ka socota magaalada Garoowe iyadoo garoonka Mire Awaare ay maanta camiri doonaan taagerayaashii ugu badnaa.
by 10 hours ago 10 hours ago
Madaxweyne Qoor-qoor Oo La Kulmay Wakiilada Midowga Yurub
Sheekada ninka reer Mareykan ee magangalyada ka helay...
Bolsonaro’s support hits fresh low ahead of Brazil...
Banaanbaxyo caawa ka bilowday Muqdisho-SAWIRO
AFRICOM: “Alshabaab Waxaa ka walwal badan Muddo kororsiga
Guddoomiye Cabdi XAASHI iyo Mahdi Guuleed oo afar...
Shir u dhaxeeya Madaxda Golaha Wadatashiga Qaran iyo...
RW Rooble oo kulamo la yeeshay Safiirada ku...
Ciidamada Booliska Puntland Oo Xiray Fanaanka Sharma Boy
Madaxweynaha Galmudug oo dib ugu laabtay Dhuusomareeb
Hay’adda ICG oo warbixin XASAASI ah kasoo saartay...
Child abuse: Apple urged to roll out image-scanning...
9/11: Shan ka mid ah Al-Qaacidada ajaaniibta ah...
Qiyaastii Boqol kun oo qof oo ku barakacay...
Organizer of Saturday rally looks to rewrite Jan....